"Education for Myanmar Youths": 2009
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု လူသားဟာ ပိုမိုငယ်ရွယ်ပြီး၊ ပြားနေတဲ့ကမ္ဘာမှာရှင်သန်ကြရတာပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ အကွာအဝေးနဲ့ အချိန်ကာလကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ပြုလုပ်လာနိုင်ပါပြီ။ သို့ပေမဲ့ တစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ လူအများစုကြီးဟာ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့် ဘေးဖယ်ထားခြင်းကို ခံစားနေကြရတုန်းပါ။
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေ တိုးတက်ထွန်းကားလာနေပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် လူသားအချင်းချင်း ဆက်ဆံ ရေးတွေမှာ ပိုလို့ ထိထိရောက်ရောက်မဖြစ်လာသေးတာပါလဲ။ လူတွေကို စုစုစည်းစည်း အတူတကွ ရှိနေစေ သင့်မယ့်အစား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ လူတွေကို ဝေးကွာနေစေရတာလဲ။
လူသားတစ်ဦးတည်း သီးသန့်နေလို့မဖြစ်ဘူး၊ လူဟာ လူမှုရေးသတ္တ၀ါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အသေအချာနားလည်ထားပြီးသားပါ။ သို့သော်လည်း စာရင်းဇယားတွေအရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်မှောက်ခေတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက လူ့အလွှာအဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာ အထီးကျန်ဆန်မှုဟာ အတော့်ကို ပျံ့နှံ လို့ နေတယ်လို့ သိရတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ကျောင်းသူကျောင်းများတွေမှာပါ။ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော လူမှုဆက်ဆံရေးမဖြစ်ထွန်းတဲ့အခါမှာ ရရှိတဲ့ ခံစားချက်ရယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပျင်းရိလေးတွဲမှုနဲ့ ရည်မှန်းချက် ကင်းမဲ့မှုတွေ တွဲဖက်လို့ပါနေတတ်ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ အထီးကျန်ဆန်နေတဲ့သူဟာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ ပုံမှန်လည်ပတ်နေမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်လက်မပါဖြစ်လာတော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဓိပါယ်ရှိမှုနဲ့ အရေးပါမှု ပျောက်ဆုံး နေလို့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေအတွက် မိမိကိုယ်ကိုဘဲ အပြစ်ဖို့လာတော့တယ်။ မိမိရဲ့ အထီးကျန်ဆန်နေမှုအပေါ်မှာ အခြားသူတွေကလည်း စာနာစိတ်မရှိ၊ နားလည်မှုမပေးနိုင်၊ သည်းမခံနိုင် တွေဖြစ်လာပြီ။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ပိုပြီးတော့ ဝေးကွာ၊ အထီးကျန်ဆန်လာရပြန်တယ်။
အရှိန်နှုန်းထားသိပ်ကို မြန်ဆန်နေတဲ့ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ အရည်အသွေးနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ တတ်သိမှုဟာ ထပ်တူကျ နေပြီး ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားအမြင့်မားဆုံးကို အချိန်တိုအတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း အသင်္ချေကို တီထွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြားသူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှုတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ကူးလူးဖလှယ်ဆက်ဆံရမှုတွေ အခွင့်အရေးများစွာကို စတေးပစ်လိုက်ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကောက်ပဲသီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်ဆိုတာဟာ အတူတူစုပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ မိသားစုတွေကို ကူညီပေးဖို့ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်လာကြတယ်။ ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ကောက်ရိတ်ပွဲတော်ရယ်လို့ ဆင်ယင်ကျင်းပကြပြန်တယ်။ အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြ၊ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြ၊ တေးသီချင်းတွေသီကျူးကြ၊ ရိုးရာအကတွေကခုန်ကြ၊ ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေပြောပြကြနဲ့ပေါ့။ အတိုချုပ် ပြောရရင်တော့ လူတွေအချင်းချင်း အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ အများကြီးဖြစ်ထွန်းခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းဆိုတာ မကြားခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလုံးရယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကျောင်းတွေဟာလည်း လည်ပတ်တဲ့နှုန်းထားမြန်ဆန်တဲ့ အခြေအနေကိုရောက်နေပြီ။ ပုံစံကျနေတဲ့ ကျောင်း တွေမှာ တစ်နေ့တာကို ခေါင်းလောင်းထိုးတာနဲ့ စတင်မယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ဘာသာရပ်တစ်ခုပြီး တစ်ခုကို တိကျတဲ့အချိန်ဇယားနဲ့သင်ကြားမယ်။ ကြားထဲမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အနီးကပ် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုတဲ့ အားလပ်ချိန်တွေရှိတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခေါင်းလောင်းထိုး ကျောင်းလွှတ်တော့တယ်။
ဆရာဆရာမတွေရော၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်တာဝန်၊ သူ့တာဝန် တွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားရှိတယ်။ တိတိကျကျထားရှိတဲ့ ပုံစံထဲမှာ (ဆရာအလုပ်၊ ကျောင်းသားအလုပ်) ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ဖို့လောက်ကိုသာ အာရုံစိုက်ကြတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်ကြပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့ အပြစ်ပေးအရေးယူခံရမှုတွေကို ရှောင်ရှား နိုင်ဖို့လိုတာကိုး။
ကံဆိုးတာ တစ်ခုကတော့ ကျောင်းမှာ အောင်မြင်မှု (စာရဖို့) ဆိုတာကိုသာလျှင် ပိုအလေးထားတတ်ကြပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းကို လစ်လျူရှုထား တတ်ကြ ပါတယ်။ အကျုိးဆက်ကတော့ အထီးကျန်ဆန်ရခြင်းဆိုတဲ့ ရလဒ်ဆိုးကို ကျောင်းတွေမှာ တွေ့မြင်ရတာပါဘဲ။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအများစုဟာ အထီးကျန်မှု ကို ခံစားကြရတဲ့အတွက် စာသင်ရာမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မလုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာ အံသြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့အတွက် ဘ၀နဲ့အဆက်အစပ်ကင်းမဲ့တယ်၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တယ်လို့ ခံစားနေရလို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း အထီးကျန်ဆန်ခြင်းဆိုတာဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေထဲမှာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိရောက်တဲ့ အကြံပြု လမ်းညွှန် အစီအစဉ်တွေကိုထားရှိကြပါတယ်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တွေရဲ့ အထီးကျန်ဆန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ အပတ်စဉ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအချင်းချင်း အုပ်စုငယ်တွင်းတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်း တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်စေ စီစဉ် ထားရှိတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် နီတိဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတွက် အကြံပြုလမ်းညွှန်သူ (ရှေ့ဆောင်လမ်းညွှန်သူ အနေနဲ့ တာဝန်ယူ ပေးတဲ့ ဆရာဆရာမတစ်ဦးဦး) တွေပါဝင်လေ့ရှိတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ ပုဂ္ဂလနှင့် ပညာရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို ဆွေးနွေးကြတာပါ။ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ မိမိရဲ့ စံတန်ဖိုးတွေကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ပြောဆိုသူတွေနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက် ကြခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေကို ပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လေ့လာစေခြင်း၊ အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံးဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ် ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ အခြားသူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံးအချက်တွေကို ရှာဖွေလေ့လာကြခြင်း စတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် အချိန်ပေး လုပ်ကြပါတယ်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဖြစ်စေ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေး တွေကို ဖန်တီးထားရှိပေးခြင်းဟာ ကျောင်းတွင်း အထီးကျန်ဆန်ခြင်းအတွက် ကုစားရာမှာ အကောင်းဆုံး ဆေး ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆူညံနေသောအတန်းသည် ဆရာမဒေါ်ခင်လှဝေ အသံကြောင့် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ ဆရာမ ၀င်လာတာ သတိမထားမိပဲ အတန်းနောက်တွင် မုန့်စားနေသူများကလဲ မုန့်ထုပ်များကို လွယ်အိတ်ထဲ မသိမသာ ထိုးထည့်လိုက်ကြသည်။ ပထ၀ီအချိန်မှ သမိုင်းအချိန်အကူးအပြောင်းတွင် သမိုင်းဆရာမ မလာသေးတာကြောင့် ကျောင်းသားသဘာဝ တွတ်တွတ်ထိုး စကားများနေကြသဖြင့် အတန်းပိုင်ဆရာမ ၀င်လာတာကို သတိမထားလိုက်မိကြ။ ဆရာမအသံထွက်လာမှ ပြူးပြူးပြာပြာ ဖြစ်ကုန်ကြရသည်။ ထက်ထက်အောင်တယောက်လဲ သူမနာမည်ခေါ်လိုက်သံဖြစ်တာကြောင့် ရုတ်တရက် လန့်သွားရသည်။ မျိုးဇော်နိုင်နှင့် နေမင်းကို လှည့်ကြည့်မိသည်။ သူမကို လှမ်းကြည့်နေသော မျက်လုံးများကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဆရာမကို မသိမသာ ခိုးကြည့်လိုက်တော့ ဒေါသများပြည့်လျှံနေသော မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဆရာမဒေါသ ဖြစ်လောက်အောင် ဘာတွေများ လုပ်ခဲ့မိသလဲလို့ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်မိသည်။ စဉ်းစားလို့ မရ။
ဆရာမရဲ့ အမိန့်သံကို ထပ်ကြားရပြန်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရတော့မည်မို့ ခေါင်းငုံ့လက်ပိုက်ရင်း သူမ အတန်းရှေ့ထွက်သွားလိုက်သည်။ သူမတို့ကျောင်းတွင် ဆရာမဒေါ်ခင်လှဝေ၏ အာဏာစက်ကား ကြီးမားလှသည်။ ဆယ်တန်းဆရာမပေမယ့် ဆယ်တန်း မရောက်ခင်ကတည်းက ဆရာမနာမည်ကို ကြားဖူးထားကြပြီးသား။ ဆရာမအတန်းသို့ ရောက်မှာကို ကျောင်းသားတိုင်း ကြောက်ကြသည်။ သို့ပေမယ့် သူမဆယ်တန်းရောက်တော့ ဒေါ်ခင်လှဝေက သူမရဲ့ အတန်းပိုင် ဆရာမဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသင်အပြ ကောင်းပေမယ့် စည်းကမ်းကြီးလွန်းတာကြောင့် သူမစာသင်ချိန်တွင် မည်သူမျှ မလှုပ်ရဲကြ။ ဆရာမကို ရိုသေလေးစားပေမယ့် ဆရာမမျက်နှာက လိုအပ်တာထက် ပိုတင်းနေတတ်တာ၊ ကျောင်းသားတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်နှက်ဆုံးမတတ်တာကိုတော့ သူမစိတ်ထဲ ဘ၀င်မကျလှ။
မျိုးဇော်နိုင်နှင့် သူမအသံတို့က တပြိုင်နက်ထွက်သွားသည်။ နေမင်းမျက်နှာကလဲ ဆီးရွက်လောက် ငယ်သလို ဖြစ်သွားသည်။
“မင်းတို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်မှာ ဘာလုပ်နေကြလဲ“
ဆရာမပြောလိုက်တော့မှ နံနက်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်ကို ပြန်သတိရသွားသည်။ သူမတို့ကျောင်းတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အချိန်ဆိုတာ ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဂီတ၊ အိမ်တွင်းမှု ဆိုပြီး ကြိုက်ရာရွေးလို့ရသည်။ သူမကတော့ ဂီတဆိုတာမှာလဲ အဖြစ်မရှိ၊ အိမ်တွင်းမှုဆိုတာကလဲ ၀ါသနာ မပါသည်မို့ တခုပဲကျန်သည့် စိုက်ပျိုးရေးကိုပဲ ရွေးဖြစ်တော့သည်။ သို့ပေမယ့်လဲ စိုက်ပျိုးရေးသာ ဆိုရသည်။ သူမတို့ တကယ်လုပ်ရသည်က အမှိုက်တောင်းလေးတွေ နှစ်ယောက်တတွဲကိုင်ပြီး ကျောင်းဘောလုံးကွင်းထဲတွင် အမှိုက်လိုက်ကောက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အမှိုက်ကောက်ပြီးလျှင် မြက်နုတ်ကြရသည်။ ဂီတယူထားသူများမှာလဲ သိပ်တော့ မထူးလှ။ ပထမလေးပတ်လောက်တော့ ပတ္တလားတီးဆရာတယောက် ရောက်လာပြီး မဟာဂီတအဆိုကို သင်ပေးသည်တဲ့။ နောက်တော့ ဆိုကရေးတီးပြိုင်ပွဲဆိုလား၊ ဘာဆိုလား ရှိ၍ ရောက်မလာပြန်တော့။ ဒီတော့ ဂီတယူထားသူများက စည်းနဲ့ ၀ါးလေးတွေ ကိုင်ပြီး ဂီတခန်းထဲတွင် စကားများကြလေသည်။ အိမ်တွင်းမှုခန်းမှာကလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း။
ဆယ်တန်းနှစ်လို စာကျက်ဖို့ အချိန်ရှားပါးသည့် နှစ်မှာ ဘာမှလဲ ထိထိရောက်ရောက်မရှိပဲ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်တာ အချိန်ကို ဖြုန်းပစ်နေသည့်၊ ဒီလိုအချိန်မျိုး ဘာကြောင့် ရှိနေရလဲ သူမမသိ။ သူမအမေကို မကျေမနပ်နဲ့ ရင်ဖွင့်တော့ ပညာရေးစနစ်ထဲမှာ ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်ပါရမယ်လို့ ထည့်ထားလို့ နေမှာပေါ့ဟုသာ ဆိုလေသည်။ “အဲလိုပါရင်လဲ တကယ်ထိရောက်အောင် ဘာကြောင့် မလုပ်ပဲ ဟန်ပြအခွံ့ကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ“ လို့ သူမပြန်မေးတာကိုကျတော့ မေမေက ဘာမှပြန်မဖြေခဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအလဟဿ အချိန်ဖြုန်းမှုကြီးကို သူမစိတ်ညစ်လှပါသည်။
“ဖွံ့ဖြိုးရေး အချိန်မှာ ဘာလို့ စာကျက်နေကြလဲ။ မင်းတို့ကို သူ့အချိန်နဲ့သူ စာလုပ်ဖို့ ပြောထားတယ်မဟုတ်လား။ သမိုင်းအချိန်မှာ ပထ၀ီစာအုပ်တွေ စားပွဲပေါ် မမြင်ချင်ဘူး။ အီကိုအချိန်မှာ သင်္ချာတွက်နေတာ မလိုချင်ဘူးလို့ ငါပြောထားတယ်မလား“
နေမင်းအသံ တိုးတိုးလေးက ထွက်ပေါ်လာသည်။ သူမကတော့ ဘာမှမပြောမိ။ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အချိန်မှာ သူ့အကန့်နဲ့သူ စိတ်ဝင်စားတတ်အောင် သူမကိုယ်သူမ လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးသား။ ဒီလောက်အထိ စည်းကမ်းမဲ့သူ မဟုတ်။ သို့ပေမယ့် စိုက်ပျိုးရေးချိန် ဆိုပြီး မြက်နှုတ်ခိုင်းထားလို့ နှုတ်စရာ မလိုတော့တဲ့ မြက်ဘေးမှာ ဟန်ပြထိုင်ပြီး စကားထိုင်များနေကြချိန်ကို အလဟဿ မဖြစ်စေချင်တာကြောင့် မှတ်စုစာအုပ်ထုတ်ပြီး စာကျက်လိုက်မိတာဖြစ်သည်။ အနီးက စာကြမ်းပိုး နေမင်းက တွေ့သွားပြီး သူမနဲ့တူတူ စာလာကျက်လေသည်။ မျိုးဇော်နိုင်ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်။ စာရွတ်သံကြားရလျှင် သူ့အတွက် ပိုအကျိုးရှိတယ်ပြောပြီး သူမတို့နား ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်။
“မင်းတို့မှာ အပြစ်ရှိလား၊ မရှိဘူးလား“
နေမင်းအသံနှင့် မျိုးဇော်နိုင်အသံတို့က ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ထွက်လာသည်။ သူမ ဘာမှ ပြန်မပြောမိ။ ဆရာမအကြည့်က သူမဆီသို့ ရောက်လာသည်။
ဆရာမအော်သံကြောင့် သူမ ဆတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ပြောလိုက်မိတာ မှားသွားပြီလားလို့ တွေးလိုက်မိသည်။ သို့ပေမယ့် သူမ မမှားပါ။ ဒါကို စိတ်ထဲက အလိုလိုသိနေသည်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဟန်ရေးပြပြီး စကားများ အချိန်ဖြုန်းနေရမယ့်အစား စာကျက်မိတဲ့ ကျောင်းသူတယောက်မှာ အပြစ်ရှိရသတဲ့လား။ မဖြစ်နိုင်ပါ။
စားပွဲပေါ်က ကြိမ်လုံးကို ဆရာမဆွဲယူလိုက်တာ တွေ့ရသည်။
စားပွဲကို ရိုက်လိုက်သော ကြိမ်လုံးသံက ထွက်ပေါ်လာသည်။
“ကဲ- တတန်းလုံးကို ဆရာမ မေးမယ်။ ထက်ထက်အောင်မှာ အပြစ်ရှိသလား၊ မရှိဘူးလား“
တတန်းလုံး တိတ်နေသည်။ ဘာသံမှ မကြားရ။ ဆရာမကို တလှည့်၊ သူမကို တလှည့် ကြည့်နေကြသည်။
“ဖြေကြလေ။ မင်းတို့မှာ ပါးစပ် မပါဘူးလား။ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်တဲ့လူတွေ လက်ထောင်စမ်း“
ဟိုတစ၊ ဒီတစ လက်များထောင်လာတာ တွေ့ရသည်။ လက်ထောင်သူတွေထဲမှာ မီမီကို တွေ့လိုက်ရတော့ သူမ ၀မ်းသာသွားလေသည်။ သူမရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း။ သူမကို ပြင်ပစာဖတ်ဝိုင်းတခုကို ခေါ်သွားပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း။ စာအရမ်းဖတ်ပြီး၊ အဖိုးတန်စကားလုံးတွေပဲ ရွေးပြောတတ်လို့ ငယ်ပေါင်း သူငယ်ချင်းတွေပေမယ့် အချင်းချင်းကတောင် ပြန်လေးစားရသူ။ ပြီးတော့ ဒီအတန်းရဲ့ အတန်းခေါင်းဆောင်။
“အဲဒီလက်ထောင်တဲ့ လူတွေပါ မတ်တပ်ရပ်စမ်း။ မင်းတို့က ငါ့ကို အာခံတယ်ပေါ့လေ“
ဆရာမ အပြောကြောင့် တချို့က လက်များ ကပျာကယာ ပြန်ချပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြလေသည်။ တချို့ကတော့ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြသည်။ ဆရာမကို သူမ မကျေမနပ်နှင့် လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ဘာလုပ်တာလဲ စဉ်းစားလို့ မရ။ ရွေးချယ်ခိုင်းပြီးမှ ကိုယ့်ဘက်ကို မထောက်ခံသူတွေကို အပြစ်ပေးတာ တရားမျှတမှု ရှိပါရဲ့လား။
“ကဲ- ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတာ။ အာခံချင်ဦး“
ဆရာမရဲ့ ကြိမ်ချက်များက အနီးဆုံး မျိုးဇော်နိုင်ကိုယ်ပေါ်သို့ အရင်ကျသည်။ ပြီးတော့ နေမင်း။ ပြီးတော့ - သူမ။ မျိုးဇော်နိုင်နဲ့ နေမင်းတို့ဆီမှာ သုံးလေးချက်ပေမယ့် သူမဆီကျတော့ ဆယ်ချက်ထက် မကတော့။ နာကျင်မှုကြောင့် သူမအံကို တင်းတင်းကြိတ်ထားလိုက်မိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ ကြိမ်တချက် ကျလာတိုင်း မျက်ရည်များ ၀ဲတက်သွားရသည်။ ငိုချင်ပေမယ့် သူမ အောင့်ထားလိုက်သည်။ “မငိုနဲ့ ထက်ထက်အောင်။ မျက်ရည်မကျမိစေနဲ့“ ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်အားပေးလိုက်သည်။ ဆရာမက အားရအောင်ရိုက်ပြီးမှ ကြိမ်ကို ပစ်ချလိုက်လေသည်။
“ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်ကြစမ်း။ အတန်းချိန်ပြီးတဲ့ အထိ မတ်တပ်ရပ်နေ။ အခုရပ်နေတဲ့ လူတွေလဲ မထိုင်နဲ့။ တချိန်လုံး မတ်တပ်ရပ်ရမယ်။ မင်းတို့သမိုင်း ဆရာမ ဒီနေ့မလာဘူး။ အီကိုသင်မယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ စာအုပ်ထုတ်“
တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ရဲပဲ ထိုင်နေသူများ၏ စာအုပ်ထုတ်၊ စာရွက်လှန်လှောသံများ ထွက်ပေါ်လာသည်။
“ငါ၊ ဒီကိစ္စကို မကျေနပ်ဘူးဟာ“
မီမီ့စကားကြောင့် သူမတို့ အကြည့်က မီမီ့ဆီ ရောက်သွားသည်။ ကျောင်းအားရက်မို့ သူမနှင့် နေမင်းတို့ မီမီ့အိမ်မှာ စုပြီး စာကျက်နေကြတာဖြစ်သည်။
“နင်တို့ အရိုက်ခံရတဲ့ ကိစ္စကို“
“ပြောရမယ် နေမင်းရဲ့။ နင်တို့က ဒီလောက်မှ မခံရတာ။ ပြောအားရှိမှာပေါ့။ ထက်ထက်ကျတော့ တကိုယ်လုံး အရှိုးချင်း ထပ်သွားတာ“
နေမင်းက သူမဆီသို့ လှည့်ကြည့်သည်။
“ထက်ထက်။ နင်နာနေသေးလားဟင်။ ဆေးလူးလိုက်ဦးနော်“
“ရပါတယ်ဟာ။ ငါ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေါ်က အနာထက် စိတ်ထဲက အနာက ပိုဆိုးတယ်ဟ။ ငါ့မှာ အပြစ်တကယ်ရှိရင် ဆရာမဘယ်လောက် ရိုက်ရိုက်ဟာ။ ခုဟာကျတော့ အပြစ်မရှိပဲ ခံရတာ“
“ဟဲ့။ နင်အခုထိ မမှတ်သေးဘူးလား။ နင်အဲလို သွားငြင်းလို့ ခံရတာလေ“
“သူက အမှန်ပြောတာပဲ။ ငြင်းတာမှ မဟုတ်တာ“
နေမင်းအပြောကို မီမီက ၀င်ချေပလေသည်။
“မှန်တာတွေ၊ မမှန်တာတွေတော့ ငါ မသိဘူးဟာ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမက ကျောင်းခန်းထဲမှာ ငါတို့ကို ရိုက်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိတယ်လေ။ သူရိုက်မှာမို့ အပြစ်ရှိလား မေးရင် ရှိတယ်ပြောပြော၊ မရှိဘူးပြောပြော အရိုက်ခံရမှာပဲ။ ဒီတော့ မရှိဘူးပြောပြီး အသေဆော်ခံရမှာထက်စာရင် ရှိတယ်ပြောလိုက်တာက ပိုမသက်သာဘူးလား“
နေမင်းက ဘောပင်လေးကို ဆော့ရင်း ပြောသည်။ မီမီကတော့ နေမင်းစကားကို နားထောင်ရင်း ပြတင်းပေါက် အပြင်သို့ ငေးနေသည်။ အမှန်တရားအတွက် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ရင်ဆိုင်လိုစိတ်ရှိသော သူမနှင့် မှန်သည်ဖြစ်ဖြစ်၊ မှားသည်ဖြစ်ဖြစ် အခွင့်အာဏာရှိသူလုပ်လျှင် ခေါင်းငုံ့ခံပြီး သက်သာရာရှာလိုစိတ်ရှိသော နေမင်းတို့ရဲ့ မတူညီသော စိတ်အခြေခံကို သတိထားမိတာမို့ သူမ ဆက်ပြောချင်စိတ် မရှိတော့။
စကားဖြတ်လိုဇောနှင့် မီမီငေးနေသည့် ပြတင်းပေါက်ဘက် လိုက်ကြည့်လိုက်မိသည်။ တဘက်ခြံထဲမှာ ကလေးလေးတယောက် ထိုင်ငိုနေတာ တွေ့ရသည်။
“အင်း- ဒီနေ့လဲ ဖိုးသားလေး အရိုက်ခံထားရပြန်ပြီထင်တယ်“
မီမီက တိုးတိုးလေး ရေရွတ်သည်။
တခါတလေမှာ ဒီကလေးလေး ငိုနေတတ်တာ တွေ့ဖူးပေမယ့် တခါမှ မီမီ့ကို မေးမကြည့်မိခဲ့။
“ငါလေ။ အဲဒီကလေးလေးကို သိပ်သနားတာပဲ။ ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်တဲ့အကြားမှာ မြေစာပင်ဖြစ်နေတာ“
“လူကြီးချင်း ပေးစားလို့ ယူထားကြရတာတဲ့ဟာ။ ငါကြားတာတော့။ အဆက်ဟောင်းတွေနဲ့လဲ ပြန်ဆက်နေကြတယ်တဲ့။ ကွာချင်နေကြတာကိုးလဲ ကလေးလေးအကြောင်းပြပြီး နှစ်ဘက်မိဘက ခွင့်မပြုဖူးတဲ့“
“တကယ်ဒုက္ခရောက်တာက ဖိုးသားလေးဟ။ ဘာမှ မသိရှာပဲ မိဘနှစ်ယောက်စလုံးက အရှုပ်ထုတ်လေးလို့ မြင်နေတာကို ခံနေရရှာတယ်။ နေ့တိုင်း အော်ဟစ်ရိုက်နှက်ခံနေရတဲ့ ကလေးလေးတယောက်ဟာ တနေ့ကျရင် လူတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ။ ကြောက်စိတ်တွေ၊ မယုံကြည်စိတ်တွေ“
“ငါတို့လဲ ဘာထူးလို့လဲဟာ။ အမှန်တရားကို မရင်ဆိုင်ရဲအောင် ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ သင်းကွပ်ခံ နေကြရတာပဲ“
သူမမှတ်ချက်ပေးလိုက်တော့ မီမီက ဆတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်လေသည်။
“ဟဲ့- ဟိုနှစ်ကောင်။ နင်တို့တွေ စာကျက်ကြဦးမှာလား“
သင်္ချာတွက်နေသော နေမင်းက သူမတို့ကို လှမ်းအော်သည်။
“နေဦးဟာ။ ငါတို့ စကားအကောင်း ပြောမလို့“
“အေး၊ အေး။ ပြောကြ၊ ပြောကြ။ နင်တို့ မိန်းခလေးတွေနဲ့ စာကျက်ရတာလေ အရူးမ လင်လုပ်ရတာကျနေတာပဲ။ တော်ပြီ။ ခြံထဲမှာ ငါဘိုင်အိုသွားကျက်ဦးမယ်“
နေမင်းက ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် စာအုပ်လဲယူ၊ ပြေးလဲ ပြေးလေသည်။ သူမပြေးလို့မရ။ သူမပြေးလျှင် သူလှမ်းစသွားသော စကားလုံးများအတွက် မီမီ့ကွန်ပါဘူး လက်သံနှင့် တွေ့သွားပေလိမ့်မည်။
“နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ မီမီ။ နေမင်းက ဒီလိုပါပဲဟာ“
နေမင်းနှင့် ရန်ဖြစ်နေကျ မီမီ့မျက်နှာလေးက တည်နေတာမို့ သူမလှမ်းမေးလိုက်မိသည်။
“ငါတို့တွေက ဒီလိုပဲ ခေါင်းငုံ့ခံနေကြရတော့မှာလား“
သူမ မီမီ့ကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။
“ငါအရိုက်ခံထားရတာကို နင်စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာမဟုတ်လား မီမီရယ်။ ထားလိုက်ပါတော့ဟာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်တရားကို ပြောထွက်သွားလို့ အနာခံလိုက်ရတာပဲ။ ဆရာမကို စိတ်ဆိုးမိပေမယ့် ငါ့ကိုယ်ငါ တော့ ကျေနပ်တယ်“
“ငါက နင်ပြောတဲ့ ကြောက်စိတ်နဲ့ သင်းကွပ်ခံရတာကို ပြောနေတာပါ။ ခုဆို ငါတို့အတန်းထဲမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိတဲ့ လူတွေလဲ အရိုက်ခံလိုက်ရတယ်၊ အပြစ်မရှိတဲ့ လူတွေဘက်က ရပ်တည်မိသူတွေလဲ စာသင်ချိန် တချိန်လုံး မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတယ်။ ငါတို့ရဲ့ စိတ်တွေထဲမှာ မှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ထက် ပိုပြီး အာဏာရှိသူက လုပ်ရင် လုပ်သမျှခံ၊ ပြန်မပြောနဲ့၊ အာမခံနဲ့၊ ပြန်ပြောရင် ပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးက အမြစ်တွယ်သွားပြီ။ ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ ငါတို့တွေက ဒီစိတ်ကြီးတွေကိုပဲ ဖက်တွယ်ပြီး ဘ၀ပင်လယ်ကြီးထဲကို ရောက်သွားကြရမှာလား“
“အေးဟာ။ နင်ပြောတာကို ငါလက်ခံတယ်။ ငါအမှန်ကို ပြောမိလို့ အရိုက်ခံရတယ်။ ဒါကို ငါက ခေါင်းငုံ့ခံပြီး ငြိမ်နေလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ လူတွေက အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ ကြောက်စရာကြီးပါလား ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ပဲ ကျန်ခဲ့မှာပေါ့နော်“
“ဟုတ်တယ်ဟ။ အဲဒါကို ငါတွေးမိနေတာ။ နင်လုပ်ခဲ့တာ အမှန်တရားဆိုတာ နင်တကယ်လက်ခံတယ် မဟုတ်လားဟင်“
“ဟဲ့။ ငါ ဘယ်နှစ်ခါ ပြောရမလဲ“
“ဒါဆို အဲဒီအမှန်တရားအတွက် ငါတို့ ရှေ့ဆက်တိုးကြရအောင်လေ“
“တကယ်လို့များ ငါတို့ တခန်းလုံးနဲ့ တခြားဆယ်တန်း အခန်းတွေအားလုံးကသာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုတဲ့ အချိန်တွေကို ကန့်ကွက်ကြရင်“
မီမီ့စကားကြောင့် သူမအံသြသွားသည်။ သူမဆီမှာ အပြစ်ရှိမရှိ တတန်းလုံးကို ဆရာမမေးစဉ်က အပြစ်မရှိလို့ ထောင်ခဲ့သော လက်ညှိုးတွေ မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းစဉ်မှာ မသိမသာ ပြန်ရုတ်သွားတာကို ပြေးမြင်လိုက်မိသည်။
“ငါတို့ တခန်းလုံးတောင် မညီနိုင်တာဟယ်။ ဆယ်တန်း အခန်းတွေအားလုံး ညီလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရမှာတဲ့လဲ။ ဆရာမမေးတုန်းက ထောင်ခဲ့တဲ့ လက်ညှိုးတွေ မတ်တပ်လဲရပ်ခိုင်းရော ပြန်ရုတ်သွားတာ မတွေ့ဖူးလား“
“နင်က ညီညွတ်ရေးဆိုတာကို အပြစ်ဒဏ်တွေ ခံနေရချိန်မှာ ညီတူညာတူ ပေါ်ထွက်လာတာလို့ ထင်နေတာလား“
“ပြစ်ဒဏ်တွေ အပေးမခံရတော့တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးပေးရမှာ။ ငါ့အထင်တော့ လူတွေအားလုံးက ညီလာရင် ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ့် သူတွေက နောက်ဆုတ်သွားမှာပဲလို့ မြင်တယ် သူငယ်ချင်း။ ငါ့ဦးလေးက ပြောဖူးတယ်။ လူတသန်းကို လူတထောင်က မလှုပ်နဲ့၊ ထောင်ချမယ်လို့ ခြိမ်းချောက်တဲ့အခါ လူတယောက်ချင်းစီ လှုပ်ရင်တော့ တယောက်ချင်းစီ ထောင်ထဲ ရောက်သွားမှာပဲတဲ့။ ဒါပေမယ့် လူတသန်းလုံး လှုပ်တဲ့အခါ လူတသန်းလုံးကို ချစရာ ထောင်မရှိတော့တဲ့အတွက် ခြိမ်းချောက်တဲ့ လူတထောင်ပဲ ထောင်ထဲ ၀င်ထိုင်နေဖို့ ရှိတော့မယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် လူတသန်းလုံး လှုပ်လာမယ့် အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးဖို့ တယောက်ချင်းစီကတော့ ကနဦးစပြီး လှုပ်ရဦးမှာပဲတဲ့“
“ဟဲ့။ နင်ငါ့ကို နိုင်ငံရေး ပြောနေတာလား“
“မဟုတ်ပါဘူးဟာ။ ငါက သူပြောတာ ပြန်ပြောပြတာပါ။ အဲဒီသဘောတရားကို ငါစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ အခုလဲ ငါတို့တွေရဲ့ အချိန်ကို အလဟဿဖြစ်စေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး အချိန်ကို ဆန့်ကျင်ကြည့်ကြမယ်လေ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီသတင်းက တခြားအခန်းတွေဆီ ပျံ့သွားမှာပဲ မဟုတ်ဘူးလား“
“အဲလိုလုပ်တဲ့ လူတွေကို ငါ့လိုပဲ ဆရာမက အသေဆော်လိမ့်မယ်“
“ထက်ထက်ရယ်။ လောကကြီးမှာ တခုခုမပေးဆပ်ပဲ ရလာတဲ့ အရာဆိုတာ ရှိဘူးလို့လားဟယ်“
ဒီလိုနှင့် တနင်္လာနေ့မှာ ကျောင်းဖွင့်တော့ မီမီရဲ့ စည်းရုံးရေး အလုပ်တွေ စလာပါတော့သည်။ တချို့က မီမီ့စကားကိုကြားပြီး မျက်လုံးပြူးကြသည်။ တချို့က ထောက်ခံသည်။ တချို့က ကိုယ်တိုင်ပါမယ်လို့ ပြောကြသည်။ မျိုးဇော်နိုင်ကတဆင့် ယောက်ျားလေး တော်တော်များများလဲ ပါလာသည်။ နေမင်းကတော့ သူမပါနိုင်လို့ငြင်းသည်။ သို့ပေမယ့် ပါလာမယ့် သူတွေကိုတော့ ဒါတွေ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ သုံးယောက်အရိုက်ခံရမှုမှာ သူပါခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရောက်တော့ မျိုးဇော်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့ သုံးယောက်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်မှာ မသွားနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းသည်။ ဆရာမ ဒေါသထွက်ပြီး ရုံးခန်းပို့မယ်၊ ဘာမယ် ခြိမ်းချောက်သည်။ ကြိမ်ဒဏ်ငါးချက်စီပေးပြီး တခြားသူတွေ သွားနေချိန်မှာ သူတို့က အတန်းထဲမှာ မတ်တပ်ရပ်နေခဲ့ရသည်။ သူမတို့ရဲ့ ပွဲဦးထွက်တိုက်ပွဲ။
ဒီလိုနှင့် တလှည့်စီ လူလဲဆန့်ကျင်လိုက်၊ စည်းရုံးရေးဆင်းလိုက်နှင့် အချိန်တွေကြာလာသည်။
တပတ်၊ နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်ကနေ ငါးပတ်လောက်ရောက်တော့ တခြားအခန်းတွေကပါ သိနေကြပြီ။ ဆယ်တန်း ဘီ၊ ဆယ်တန်းစီ၊ ဆယ်တန်း ဒီ တို့မှာလဲ သူမတို့လုပ်နည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်သူတွေ ရှိလာကြပြီ။ မီမီကတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ စည်းရုံးဟောပြောနေဆဲ။ မျိုးဇော်နိုင်တို့ အင်အားတွေကလဲ တောင့်လာသည်။ ကနဦးအစမှာ ဆရာမကို မကျေနပ်တာကြောင့် လုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့် ကြာလာတော့ အဓိကမှာ ဆရာမရဲ့ မတရားတဲ့ အာဏာစက်ကို ဖယ်ရှားဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်တွေမှာ ကျောင်းသားတွေအတွက် တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် အလုပ်တွေ လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်း သူမနားလည်လာတော့သည်။
သူမတို့ လုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်လေးတွေက အရှိန်ရလာသလို တဘက်မှာလဲ အခက်အခဲတွေ တွေ့လာရသည်။ ဆရာမက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပွဲတွေမှာ ပါသူတွေကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးရုံမက တခြားစာသင်ချိန်များတွင်လဲ သူမတို့ အုပ်စုတွေကို အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာတော့သည်။ စာမေးရင်း “၏သည်မလွဲ“ မရလို့ဆိုကာ သူမလက်ဝါးပေါ်သို့ ကျရောက်လာခဲ့သော ကြိမ်ချက်တွေ မည်မျှ ရှိခဲ့ပြီ မသိ။ အိမ်က လူကြီးတွေ သိသွားပြီး ဆရာမကို အကျိုးအကြောင်း သွားပြောဖို့ ကြိုးပမ်းကြသည်။ သို့ပေမယ့် ဆရာမက လက်မခံ။ သူမက သူ့အာဏာကို ဖီဆန်တယ်၊ သူ့ကို အာခံနေတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးချိုးပြီး ဆုံးမနေတာပါ လို့သာ ဆိုသည်။ သူမတို့ ဘာကို လိုချင်နေတာလဲ၊ ဘာကို ဖြစ်ချင်နေတာလဲ ဆိုတာ သိအောင် ဆရာမဘက်က လုံးဝ မကြိုးစားတော့။
ဒီကြားထဲ ဇင်မာတို့အုပ်စုက သူမတို့တွေကို အမြင်တမျိုးနှင့် မြင်လာပြန်သည်။ သူမတို့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေက ကျောင်းသားတွေကိုအရိုက်ခံရအောင် လုပ်နေတာပဲရှိပြီး အောင်မြင်ဖို့ လမ်းလဲမရှိ၊ လုပ်နေသူတွေမှာကလဲ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ လူတွေကပါတယ်လို့ တီးတိုးဆိုနေကြသည်။ စည်းရုံးပြောဆိုတဲ့ မီမီကို မြင်ရင်လဲရှောင်ထွက်သွားကြသည်။
ဇင်မာနှင့် သူမကတော့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်တာမို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇင်မာတို့ ဘယ်လိုတွေးနေတာလဲ သိရအောင် သူမ ဇင်မာ့ဆီ သွားလည်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။
ဇင်မာ့အိမ်ကို သွားတော့ ဇင်မာက ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုပါသည်။
ဇင်မာက ရီပြီး ပြောပေမယ့် ဒီစကားထဲမှာ တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလဲ ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ သူမရိပ်မိလိုက်သည်။ သူမစိတ်မကောင်း။ သူမတို့တွေက တတန်းတည်းသားချင်းတွေ။ ဆရာမနဲ့ ပြဿနာတက်တုန်းက လက်ညှိုးထောင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ဇင်မာလဲပါတာ သူမ မှတ်မိလိုက်သည်။
“ဟင့်အင်း။ ငါက နင့်ဆီကို သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ အလည်လာတာပါ“
“နင်လုပ်တာတွေထဲမှာ မပါတဲ့ ငါ့ကို နင်က သူငယ်ချင်းလို့ တကယ်သတ်မှတ်လို့လား“
“သတ်မှတ်လို့ လာလည်တာပေါ့ဟ။ သူငယ်ချင်းတိုင်း အလုပ်တူတူလုပ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောလို့လဲ။ အလုပ်တူတူလုပ်တဲ့ လူတိုင်းပဲ သူငယ်ချင်းဖြစ်မယ်လို့လဲ ဘယ်သူက ပြောလို့လဲ“
ဇင်မာ မျက်မှောင်လေးကြုတ်ပြီး တွေးနေတာ တွေ့ရသည်။
“ဟဲ့၊ ငါ့ကို ဘာကျွေးမှာလဲ“
“နင်ထိုင်ဦးနော်။ ငါတို့အိမ်မှာ ဒီနေ့ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲလုပ်စားတယ်ဟ။ နင့်အတွက် ငါသွားပြင်လိုက်ဦးမယ်“
အိမ်နောက်ထဲ ၀င်သွားသော ဇင်မာ့ကို ကြည့်ရင်း သူမသက်ပြင်း ချလိုက်မိသည်။ ဇင်မာက ဆရာမရဲ့ အာဏာစက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်နေသူ မဟုတ်မှန်း သူမ စိတ်ထဲက အလိုလို သိနေသည်။ သို့ပေမယ့်လဲ သူမတို့ ဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စုများနဲ့လဲ နီးကပ်မလာခဲ့။ ဘာတွေကများ စည်းခြားနေသလဲ။ သူမ စဉ်းစား အဖြေထုတ်နေမိသည်။
သူမ အချိန်ကြာကြာ အဖြေမထုတ်လိုက်ရပါ။ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲစားရင်း စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ကြသည်။ သူမတို့ကို ဇင်မာတို့မကျေနပ်နေသည့် ကိစ္စများကို မသိမသာ ဖော်ထုတ်ယူရင်း သူမလိုချင်သည့် အဖြေက ထွက်သွားခဲ့ပါတော့သည်။
“ငါတို့ နေမင်းကို မကြိုက်ဘူးဟာ။ သူက ငါတို့ရှေ့ဆိုရင် ဒီကိစ္စတွေက သူကစလို့ဖြစ်လာတာပါ၊ သူကခေါင်းဆောင်ပါ ဆိုပြီး ထောင်ထောင်ထောင်ထောင် လုပ်တယ်။ ဆရာကြီးလုပ်တယ်။ ဆရာမရှေ့ ဆိုရင်ကျတော့ အမြီးကုပ်နေတာပဲ“
“မျိုးဇော်နိုင်တို့ကျတော့လဲ တမျိုး။ သူတို့ အနာခံပြီး ပါနေတာ ငါတို့မြင်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ငါတို့ကို မြင်ရင် မပါရကောင်းလားဆိုပြီး ရန်လုပ်တယ်။ ငါတို့အတွက် သူတို့ အနာခံလုပ်နေရတာဆိုပြီး မပါတာကို အပြစ်တင်တယ်။ ဆရာမရဲ့ ဘက်တော်သားတွေလို့ စွပ်စွဲတယ်။ အခြေအနေ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငါတို့ မပါဖြစ်ခဲ့ဘူးဟာ။ ငါဝန်ခံတယ်။ နင့်တုန်းက ငါလက်ထောင်ပြီးမှ ဆရာမက အပြစ်ပေးတော့ ငါကြောက်ပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ရတယ်။ ငါစက်ဘီးမှောက်တုန်းက ခြေထောက်ကျိုးထားဖူးတယ်ဟ။ ငါ့ခြေထောက်က ကြာကြာရပ်လို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် ငါလက်ပြန်ချလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့်ဟာ ဆရာမ မတရားဘူးဆိုတာ ငါတို့ သိနေတာပဲ။ သိနေပြီး မပါဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ငါတို့အားနည်းချက်။ ဒါကိုပဲ လာထုတ်ဖော်ပြီး အပြစ်တင်နေတော့ ငါတို့လဲ စိတ်တိုတာပေါ့။ ဒါနဲ့ နင်တို့ကို ရှောင်နေတာ“
“မီမီကိုလဲ ငါတို့ မကြိုက်ဘူး။ အလကား ငကြောက်မ။ သူက လူတွေကို လိုက်စည်းရုံးလိုက်၊ နင့်ကို မြှောက်ပေးလိုက်နဲ့။ သူကိုယ်တိုင်သတ္တိရှိရင် ဘာလို့ ရှေ့က ၀င်မပါလဲ။ တကယ်ဖြစ်လာတော့ နင်ပဲခံနေရတာ။ ငါတို့အတန်းသားတွေပဲ ခံနေရတာ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရောက်တိုင်း ရိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတာကို ငါတို့လဲ စိတ်ချမ်းသာနေမယ်လို့ နင်ထင်လို့လား“
ဒီစကားလေးတွေထဲမှာ ဇင်မာတို့အုပ်စုနဲ့ သူမတို့ စည်းခြားနေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို သူမ ရှာတွေ့သွားခဲ့ပါသည်။
ဇင်မာပြောနေတဲ့ အကြောင်းများကို သေချာနားထောင်ပြီးမှ သူမစကားစရသည်။ တဘက်က ဘာကို ဆိုလိုမှန်းမသိပဲ ဘတပြန်၊ ကျားတပြန်ပြောပြီး ရှင်းလို့ရသည့် ကိစ္စမျိုးမဟုတ်မှန်း သူမနားလည် သိရှိနေခဲ့သည်။
“နေမင်းက ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေသူ မဟုတ်ပါဘူး ဇင်မာ။ ပြဿနာဖြစ်စတုန်းက သူလဲ ပါတယ်ဆိုတော့ သူကလဲ အဲလိုပြောချင်မှာပေါ့ဟာ။ ငါတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အရပ်အငြိမ့်ပွဲကဖူးတာကို အကြောင်းပြုပြီး မင်းသမီးလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထင်နေတဲ့ လူတွေ၊ စုပေါင်းလမ်းဖောက်တုန်းက ဥက္ကဌလုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပဲ ထာဝရ ရပ်ကွက်ခေါင်းဆောင်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထင်နေတဲ့ လူတွေ၊ စီကနဲဆိုရင် ပါလိုက်ပြီး တကယ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတဲ့ လူတွေ အများကြီးပဲလေ။ နင်တွေ့ဖူးတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါတွေက လူ့သဘာဝပဲ ဥစ္စာ။ ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်နေတာထက်စာရင် လျစ်လျုရှုပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ်လိုက်တာက ပိုထိရောက်မယ်လို့ ငါထင်တယ်။ သူ့ဘာသာသူ ဘယ်လောက်ခေါင်းဆောင်လို့ အော်နေနေ၊ လူတွေက သူ့ကို ခေါင်းဆောင်လို့ အသိအမှတ်ပြုတာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်ကလဲ ဘာမှမလုပ်၊ ဘယ်သူကမှလဲ အသိအမှတ်မပြုပဲ ခေါင်းဆောင်လို့ ထိုင်အော်နေတဲ့လူကို စိတ်ပျက်ဖို့ စာရင်းထဲတောင် ထည့်ဖို့ လိုအပ်လို့လား“
“မျိုးဇော်နိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျောင်းဘောလုံးပွဲ ဥပမာကိုပဲ ပေးရမလား မသိဘူးဟာ။ မနှစ်တုန်းကလေ ငါတို့နဲ့ ထ (၁) နဲ့ ဘောလုံးပွဲတုန်းက နင်လဲပါတယ်မလား။ ငါတို့တွေ မင်းဟိန်းတို့ကို သွားအားပေးကြတာလေ။ ငါတို့ကလဲ မင်းဟိန်းတို့ကို နိုင်စေချင်၊ မင်းဟိန်းတို့ကလဲ မနိုင်နိုင်၊ ဟိုဘက်အသင်းကလဲ လက်ရည်ကသာနေတော့ စိတ်တွေတို၊ နောက်ဆုံးကျတော့ ကက်ပတိန်လုပ်တဲ့ မင်းဟိန်းနဲ့ ငါတို့အတန်းထဲက ရဲထွတ်တို့ ထထိုးကြလို့ ငါတို့ ၀င်ဆွဲရသေးတယ်နော်။ မင်းဟိန်းက ပြောတယ်လေ။ မင်းလာကန်ကြည့်ပါလားကွလို့။ ရဲထွတ်က ပြောတယ်လေ။ ငါက အားပေးနေတာ။ မင်းတို့ကို အသုံးကျမယ်ထင်လို့ဆိုပြီး။ ဒါကြောင့် ထထိုးတာမလား။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်လုံး တူနေတာတခုက ငါတို့ဘောလုံးအသင်းကို နိုင်စေချင်တာ တခုပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘေးက ကြည့်နေသူကလဲ ကိုယ့်လူတွေကို နိုင်စေချင်ပြီး အားမလိုအားမရဖြစ်တယ်။ အပြစ်တင်တယ်။ ချွေးတွေနစ်ပြီး ကွင်းထဲမှာ ကန်နေရတဲ့ လူကလဲ ဒီလောက်ကြိုးစားပေးနေတာတောင် အပြစ်တင်နေတော့ ဒေါသထွက်တယ်။ အဲဒီကနေ အချင်းချင်း ပြန်ချကုန်ကြတာ။ နင်မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား။ အခုလဲ ဒီလိုပါပဲဟာ။ မျိုးဇော်နိုင်တို့က အနာခံပြီး လုပ်နေကြတာ။ လုပ်နေရင်း ကြာလာပေမယ့် ဆရာမကလဲ မလျှော့။ ခံရတာကလဲ များလာနဲ့ “ငါတို့ပဲ လုပ်နေရတယ်၊ ငါတို့ပဲ နာနေရတယ်“ ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ၀င်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်လို မလုပ်တဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်မိတော့တာပဲ။ နင်တို့ကလဲ ဆရာမ မတရားလုပ်တာကို မတရားဘူးဆိုတာ စိတ်ထဲက သိနေတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလုပ်ခဲ့မိတာကိုလဲ စိတ်ထဲမှာ မသိမသာ guilty ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့အမြင်ပြောရရင် အဲဒီစိတ်ဝင်နေတော့ ဘာကြောင့် မလုပ်တာလဲဆိုတာကို သူများတွေကို ပြောဖို့၊ နင်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ ငါတို့ မလုပ်ခဲ့တာ မှန်တယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကို ပြန်ပြောဖို့ လက်ညှိုးထိုး ပုံချစရာတွေ လိုနေတယ်။ အဲဒီမှာတင် နင်တို့အုပ်စုနဲ့ မျိုးဇော်နိုင်တို့နဲ့ စငြိကုန်ကြတာ။ သူတို့ကလဲ နင်တို့မလုပ်တာကို အပြစ်လုပ်ပြီး ပြောတယ်၊ နင်တို့ကလဲ သူတို့ လုပ်နေတဲ့လူတွေ အသုံးမကျလို့ မပါတာလို့ ပြောမှာပဲ။ ငါတော့ အဲလိုပဲ မြင်တယ်“
“မီမီကိုတော့ နင်တို့က အထင်လွဲနေတာပါ။ ဇာတ်ကရင်တောင် ဇာတ်ညွန်းရေးတဲ့ လူ လိုတယ်မဟုတ်လား။ စင်နောက်မှာ ကြိုးဆွဲတဲ့လူတွေ၊ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေအတွက် အ၀တ်အစားတွေ ပြင်ပေးမယ့်လူတွေ၊ မင်းသားမင်းသမီးကို မိတ်ကပ်လိမ်းပေးမယ့်လူတွေ လိုတယ်လေ။ အားလုံး စင်ပေါ်ကို တပြိုင်တည်း တက်ကလို့မှ မရတာ။ အခုငါတို့အတန်းထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ တခြားအခန်းတွေထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေက မီမီရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကနေ ထွက်နေတာ။ ဒါကိုလဲ ငါတို့ထဲမှာ သူပဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ရှေ့ထွက်မင်းသမီး၊ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီးတွေ ဘယ်လောက် အကကောင်းကောင်း ဒီဇာတ်ကို ကမယ့် ဇာတ်ညွန်းမရှိရင် ကကွက်တွေ ဘယ်ကြည့်ကောင်းပါ့မလဲဟာ။ ရှေ့မထွက်တိုင်း ကြောက်လို့ မဟုတ်ဘူး။ သူက နောက်မှာ နေဖို့ လိုအပ်လို့ နေနေတာပါဟယ်“
“ကဲ။ ကလန်ကဆန် လုပ်မယ့် လူတွေ ရှိသေးလား။ လုပ်ရဲတဲ့ လူတွေ နေခဲ့။ ကျန်တဲ့ လူတွေ နှစ်ယောက်တတွဲ ကိုယ်သွားရမယ့် နေရာဆီ သွားကြ“
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်က နံနက် အီကိုချိန် အပြီးမှာမို့ စာသင်ချိန်ပြီးတာနဲ့ ဆရာမက ဒီလိုပြောနေကြ။ သြဂုတ်လကတည်းက စခဲ့သော သူမတို့ အာဏာဖီဆန်ပွဲလေးသည် အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှိနေဆဲ။ တခြားအခန်းမှ ကျောင်းသားများနဲ့ သူမတို့အခန်းမှ ကျောင်းသားများ စုစည်းပြီး ဆရာမကြီးဆီ တောင်းဆိုစာကလဲ ပို့ထားပြီးသားမို့ ဒီတပတ်ပွဲကတော့ ပိုကြီးကျယ်မည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ မီမီကတော့ ပွဲကြီးဖြစ်လာတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
သူမတို့ စောင့်နေကြသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်ပင် မည်သူမျှ မလှုပ်ကြ။ နေမင်းက မျက်လုံးအပြူးသားနှင့် တတန်းလုံးကို လှည့်ပတ်ကြည့်နေသည်။ သူမ ရင်ထဲတွင်လဲ တဒိတ်ဒိတ်နှင့် ခုန်နေသည်။ မီမီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၀မ်းသာအားရ ပြုံးပြတာ တွေ့ရသည်။
ဆရာမရဲ့ စိတ်မရှည်သော အသံက ထပ်ထွက်လာသည်။
ဘယ်သူမှ မလှုပ်ကြ။ ခေါင်းငုံ့ရင်း ထိုင်ခုံများမှာ ထိုင်နေကြဆဲ။
“ဘာလဲ။ မင်းတို့က ငါ့ကို အာခံနေကြတာလား“
ဆရာမက ကြိမ်လုံးကို ဆွဲသည်။
မည်သူမျှ မလှုပ်ကြ။ စားပွဲပေါ်သို့ ရိုက်ချလိုက်သော ကြိမ်လုံးသံ တဖြန်းဖြန်းကသာ ဆက်တိုက်ထွက်လာသည်။
“ဇင်မာကျော်တို့ ဂီတတွေ၊ သွားကြတော့လေ။ ဂီတခန်းကို“
ဆရာမက နာမည်ခေါ်ပြီး ပြောလာပြီ။
ဇင်မာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တာ တွေ့ရသည်။ သူများ အတန်းထဲက ထွက်သွားလေမလား။ စိုးရိမ်စိတ်နှင့် သူမ ဇင်မာ့ကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒါပေမယ့် ဇင်မာက အတန်းထဲက ထွက်မသွား။ လှုပ်ရှားမှုအစား စကားသံကသာ ထွက်ပေါ်လာသည်။
“ဆရာမ။ ဂီတခန်းမှာ တကယ်ဂီတသင်ရင် သမီးသွားမှာပါ။ အခုကတော့ ဆရာလဲ မရှိပဲ အမည်ခံပဲဖြစ်နေတယ်။ စည်း၊ ၀ါးတွေ ကိုင်ပြီး စကားသွားများနေရသလို ဖြစ်နေတယ်။ အချိန်တွေ အလကားကုန်တာကြောင့် သမီးမသွားချင်တော့ဘူး။ သမီးကို ဆရာမကြိုက်တဲ့ အပြစ်ပေးပါ“ တဲ့။
ဆရာမ ကြိမ်လုံးဆွဲပြီး ဇင်မာကျော်နား သွားတော့မည်လားလို့ သူမ ထင်လိုက်သည်။ ဆရာမက မသွားသေး။
“သန့်ဇော်။ မင်းတို့ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့တွေ သွားတော့လေ“
သန့်ဇော် လက်ပိုက်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်သည်။
“ကျွန်တော်လဲ ဇင်မာကျော်လိုပါပဲ ဆရာမ။ အချိန်တွေ အလဟဿ မဖြစ်ချင်ဘူး“
ဆရာမက သန့်ဇော် ဆီမှ အကြည့်ကို ဖယ်ရှားပြီး သင်းသင်းမာကို လှမ်းကြည့်သည်။ ဆရာမ မခေါ်သေးခင်မှာပင် သင်းသင်းမာ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တာ တွေ့ရသည်။ သင်းသင်းမာဆိုတာက အတန်းထဲမှာ ဆရာမရဲ့ အချစ်ဆုံးတပည့်။ သင်းသင်းမာ အမေနဲ့ ဆရာမတို့က မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ။ လပတ်စာမေးပွဲတိုင်းမှာ ပထမအမြဲရနေပြီး စာကလွဲရင် ဘာကိုမှ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ မထင်ရလောက်အောင် အေးအေးဆေးဆေးလေး နေတတ်သူ။
“သမီးတို့ အိမ်တွင်းမှုတွေလဲ အဲလိုပဲ မြင်တယ်ဆရာမ။ အချိန်တွေ မကုန်ချင်တော့ဘူး။ ဆရာမကို အာခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြနေတာပါ“
သင်းသင်းမာရဲ့ စကားအဆုံးမှာ ဆရာမ ငိုင်သွားတာ တွေ့ရသည်။ ပြီးတော့ ဆတ်ခနဲ ထရပ်သည်။ တတန်းလုံးကိုများ ပွဲကြမ်းတော့မည်လား။ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို သူမလိုက်ကြည့်မိသည်။ မတ်တပ်ရပ်နေသော ဇင်မာ၊ သန့်ဇော်နဲ့ သင်းသင်းမာတို့က သူမကို လှမ်းပြုံးပြသည်။ တယောက်ကို တယောက် အားပေးသော အပြုံးများ။ ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ ငါတို့အားလုံး အတူရင်ဆိုင်ကြစို့ဆိုတဲ့ အပြုံးများ။ စာသင်ခန်းလေးထဲတွင် လွန်ခဲ့သော သုံးလကျော်ကလို ကြောက်စိတ်များ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပြည့်နှက်မနေတော့။ ကြောက်စိတ်ကို ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်၊ အပြန်အလှန် ယုံကြည်စိတ်၊ မျှဝေခံစားစိတ်တွေနဲ့ သူမတို့အားလုံး အနိုင်ယူလိုက်ကြပြီ။ ညီညွတ်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော သတ္တိတို့က သူမတို့ သွေးကြောထဲမှာ စီးဆင်းနေကြပြီ။
ဆရာမဒေါ်ခင်လှဝေက တတန်းလုံးက သူမတို့ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေကို တယောက်ချင်းစီ အကဲခတ်ကြည့်သည်။ ပြီးတော့ လက်ထဲက ကြိမ်လုံးကို လွှတ်ချလိုက်တော့သည်။
“ဆရာမတို့တွေ ညှိကြတာပေါ့။ ကျောင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းသူနှစ်ယောက် ရုံးခန်းကို လိုက်ခဲ့“
မီမီက သူမကို မေးဆတ်ပြသည်။ ပြီးတော့ သင်းသင်းမာကို လိုက်သွားဖို့ တိုက်တွန်းသည်။ မျိုးဇော်နိုင်နှင့် နေမင်း တို့ လည်း လိုက်ထွက်လာကြသည်။
“ဆရာမက နင်တို့ကို ဖိအားပေးရင် ငါတို့ကို လာပြေးပြောနော်။ ငါတို့ ထလိုက်လာမယ်“
ဇင်မာက နောက်ကနေ လှမ်းအော်ပြောသည်။ သူမ ဇင်မာ့ကို အားရပါးရ ပြုံးပြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။
ဒီလိုနှင့် အလုံးစုံတင်းမာမှုတခုရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးက ပေါ်ထွက်လာပါတော့သည်။ ဆရာမဘက်ကလဲ အင်အားသုံး ဖြေရှင်းတာတွေ မရှိတော့။ သူမတို့ တောင်းဆိုတာတွေကို ဆရာမက သေချာနားထောင်ပေးခဲ့သည်။ သူမတို့ ပြောသည့်အချက်အလက်များကို ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဆီ ခေါ်သွားပြီး တင်ပြပေးသည်။ ဆရာမကြီးနှင့် သူမတို့ တိုက်ရိုက်တွေ့ပြီး စကားပြောကြသည်။ တခြားအခန်းများမှ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များကိုလဲ သွားခေါ်ခိုင်းသည်။ ဂီတ၊ အိမ်တွင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာရှာလို့ မရသည့် အခက်အခဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးအချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ စိုက်ခင်းတခုစီအတွက် မြေနေရာ အခက်အခဲ စတာတွေကို ဆရာမတို့ဘက်မှ ရှင်းပြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ အချိန်က ပညာရေးစနစ်အရ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားရသည်များကိုလဲ ပြောပြသည်။
မဖြစ်မနေရှိနေရမည်ဆိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်ကို လုံးဝ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကို တောင်းဆိုချက်ကို သူမတို့ကျောင်းသားများက ရုတ်သိမ်းပေးသည်။ ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးရှိအောင် မလုပ်နိုင်သည့် အခက်အခဲများကိုလဲ နားလည်လာသည်။ အချိန်တွေ အလဟဿ မကုန်စေချင်သည့် ကျောင်းသားများရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကိုလဲ ဆရာမများက နားလည်ပေးလာကြသည်။ တဘက်ကို တဘက်က နားလည်ပေးမှုကြောင့် အပေးအယူ အလျှော့အတင်းများ ရှိလာသည်။ တဘက်နှင့် တဘက် ယုံကြည်လာကြသည်။ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာမတို့နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ မရှိတော့ပဲ အခြေအနေတခုမှာ အကောင်းဆုံး အဖြေထွက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဦးတည်ပြောလာကြတော့သည်။
ညှိနှိုင်းမှုများ ပြီးသွားတော့ သူမတို့တတွေ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ကိုယ့်အတန်းဆီ ကိုယ်ပြန်ကြလေသည်။ နေမင်းက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းကို အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နှင့် တတန်းလုံးကို ရှင်းပြတော့သည်။ သူမ၊ မျိုးဇော်နိုင်နှင့် သင်းသင်းမာတို့ကတော့ ကိုယ့်ခုံမှာ ကိုယ်ပြန်ဝင်ထိုင်ကြသည်။ မီမီကတော့ နေမင်းပြောသည်များကို ပြုံးပြုံးလေးနှင့် နားထောင်နေသည်။
ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲကတော့ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်သူတွေပဲ လုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့၊ ဘယ်သူတွေပဲ ဖန်တီးခဲ့၊ ဖန်တီးခဲ့၊ ဘယ်သူတွေပဲ ခေါင်းဆောင်နာမည်နဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့၊ အဆုံးသတ်မှာ အကျိုးရှိသော ရလဒ်နဲ့ ပွဲပြီးသွားဖို့ကသာ အဓိက မဟုတ်ပါလား။
ခင်မမမျိုး (၁၉၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉)
ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း - ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ကလေးသူငယ်များရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ တခြားစွမ်းရည်တွေဖြစ်တဲ့ နားလည်မှု စွမ်းရည်၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး စွမ်းရည်တွေအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေ စပြီး တွားသွားလာတာ၊ တတောက်တောက်လျှောက်လာတာလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်လာနိုင်မှုအတွက် ပထမဆုံး ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာလေးတွေပါ။ ကလေးငယ်လေး စပြီး တွားသွားလာတာနဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေက ကလေးငယ် ရွေ့လျားနိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်သစ်လေးကို ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာ၊ သူ့အတွက် ကစားစရာ နေရာ သတ်မှတ်ပေးတာလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှလဲ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ်ကာယကြီးထွားမှုနှုံးဆိုတာ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ကွာခြားပါတယ်။ ကိုယ်ကာယကြီးထွားနှုန်းဆိုတာက ကလေးရဲ့ အရပ်နဲ့ အလေးချိန်ကြီးထွားမှုနဲ့ ဆက်စပ်တာဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်ကာယဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားနိုင်မယ့် စွမ်းရည်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည် တိုးတက်မှုကို ပညာရှင်တွေက တိုးတက်မှုပုံသဏ္ဍာန်တွေ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီသဏ္ဍာန်တွေကတော့
(၁) ရိုးရှင်းမှုမှသည် ရှုပ်ထွေးမှုဆီသို့
ကလေးငယ်လေးဟာ လမ်းမလျှောက်နိုင်ခင်မှာ မတ်တပ်အရင်ရပ်တာ၊ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားတာတွေ မလုပ်နိုင်ခင်မှာ လမ်းအရင်လျှောက်တာတွေကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဦးခေါင်းမှ သည် ခြေဖျားဆီသို့
ကလေးငယ်လေးရဲ့ တိုးတက်မှုက ခေါင်းကနေ စတင်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းကို ဘယ်ညာ လှည့်လာတာကနေ လက်ကလေးတွေ လှုပ်တာ၊ ခြေထောက်လေးတွေ လှုပ်လာတာလေးတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာပါတယ်။
(၃) အတွင်းမှ အပြင်သို့
ကလေးငယ်လေးဟာ သူ့လက်လေးတွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်း (ဥပမာ- အရုပ်၊ သော့တွဲ) တခုကို လိုချင်တဲ့အခါ ဒီပစ္စည်းဆီ ရောက်အောင် အရင် လက်က လှမ်းပါတယ်။ နောက်မှ ကောက်ယူနိုင်တဲ့အထိ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်သွားပါတယ်။
(၄) ယေဘုယျမှသည် သီးခြားဆီသို့
အရမ်းငယ်တဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုကို ယေဘုယျတုန့်ပြန် တာလေးတွေဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးလေးကျယ်လာတာ၊ လက်ကလေးနဲ့ ခြေထောက်ကလေးတွေကို ဝှေ့ယမ်းတာနဲ့ ပြသပါတယ်။ အရွယ်နည်းနည်း ရလာတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွင်မှုကို ပြုံးပြတာ၊ လက်ခုပ်တီးပြတာလေးတွေနဲ့ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါအလိုက် ပြုလုပ်တတ်လာပါတယ်။
ဒီလို သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်တိုးတက်မှုမှာ စွမ်းရည်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တမျိုးကတော့ အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည် (gross motor skills) ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တမျိုးကတော့ တိုးမြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည် (fine motor skills) ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်က ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကြွက်သားတွေကို အသုံးပြုရတဲ့ စွမ်းရည်တွေဖြစ်ပြီး၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ ပြေးလွှားတာ၊ အမြင့်ကို တွယ်တက်တာ တွေနဲ့ စပ်ဆိုင်ပါတယ်။ တိုးမြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်ကတော့ လက်လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည် (အရာဝတ္ထု၊ ဘောလုံးစတာတွေကို လွှင့်ပစ်တာ၊ ဖမ်းယူတာ) တွေနဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည် (လက်ညှိုးညွှန်တာ၊ ပုံဆွဲတာ၊ ခရင်းနဲ့ဇွန်းတွေ အသုံးပြုတတ်တာ၊ စာရေးတာ၊ ဖိနပ်ကြိုးချည်တာ) စတာတွေ နဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီး ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် ကိုယ်ကာယစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကို တင်ပြပါမယ်။
အသက် (၁၂) လ
အကြမ်းဖျင်းထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ လဲလျောင်းရာကနေ ငုတ်တုတ်ထိုင်နိုင်တာ၊ လူတွေနဲ့ အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေရဲ့ အကူအညီမပါပဲ မတ်တပ်ရပ်နိုင်တာ၊ လက်နဲ့ ဒူးကို အသုံးပြုပြီး တွားသွားနိုင်တာ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ၀က်ဝံသွားသွားနိုင်တာ၊ တယောက်တည်း အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်နေနိုင်တာ၊ လူတယောက်ရဲ့ လက်တဘက်ကို ကိုင်ပြီး လမ်းစလျှောက်နိုင်လာတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၃ လရှိတဲ့ ကလေးငယ်တ၀က်ကျော်က လမ်းလျှောက်လာနိုင်ပါတယ်။
တိုးမြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာတွေကို လှန်လှောနိုင်တာ၊ အရုပ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တမင်ပစ်ချတာ၊ လွှင့်ပစ်တာ၊ ကျသွားတဲ့ နေရာကို လိုက်ကြည့်တာ၊ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကို လက်မနဲ့ လက်ညှိုးထိပ်လေးကို အသုံးပြုပြီး ကောက်ယူဖို့ ကြိုးစားတာ၊ သူနှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို လက်ညှိုးညွှန်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်လေးတွေမှာ ကလေးတွေက ပစ္စည်းတွေပစ်ချရင် မိဘတွေက ခဏခဏကောက်ပေးရတာကို စိတ်မရှည်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးရဲ့ တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်ချလိုက်၊ ကောက်ပေးလိုက်နဲ့ ကလေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကစားနေတဲ့ ကစားပွဲလေးတခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ပျော်စရာကောင်းသွားပါမယ်။
ဆယ့်နှစ်လသားအရွယ်ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူကြီးမိဘတွေက လုပ်ပေးသင့်တာတွေကတော့ ကလေးငယ်လေး လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုတိုးတက်စေဖို့ ဘီးနဲ့တွန်းလို့ရတဲ့ အရုပ်လေးတွေ ၀ယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သံစုံမြည်တဲ့ ရုပ်ပုံစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပြသင့်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ လက်ချောင်းလှုပ်ရှားမှု တိုးတက်ဖို့ သစ်သားတုံးလေးတွေ၊ တခုနဲ့ တခု အဆင့်ဆင့် ထပ်လို့ရတဲ့ အရုပ်လေးတွေ ပံ့ပိုးပေးသင့်ပါတယ်။ အရုပ်လေးတွေ မရှိဘူးဆိုရင်လဲ ကတ်ထူစက္ကူပုံးလေးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေကို ပြောပြရပါမယ်။ ကလေးငယ်လေးက နားမလည်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒါဟာ စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတာကြောင့် ကလေးကို အချိန်ပေးပြီး စကားပြောရပါမယ်။ သီချင်းလေးတွေ ဖွင့်ပေးရပါမယ်။
အသက် (၁၈) လ
အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ ပုံမှန် လမ်းလျှောက်ပြီး၊ ထိုင်ချလိုက်တာ မဟုတ်ပဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တန့်တာ၊ လူကြီးတွေထိုင်တဲ့ ကုလားထိုင်ပေါ်တွယ်တက်ပြီး တက်ထိုင်တာ၊ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရာကနေ သူ့ဘာသာသူ မတ်တပ်ရပ်နိုင်တာ၊ လှေကားတွေကို လက်တန်းကိုင်ပြီး တက်နိုင်၊ ဆင်းနိုင်တာ၊ ဒူးထောက်နိုင်တာ၊ ပြေးလွှားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
တိုးမြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို လက်ညှိုးညွှန်ပြတာ၊ သေးငယ်တဲ့ သစ်သားတုံးလေးတွေကို သုံးဆင့်အထိ ထပ်တင်နိုင်တာ၊ အစားအစာကို သူ့ဘာသာသူဇွန်းနဲ့စားတာ၊ တံခါးဘု၊ လက်ကိုင်တွေကို လှည့်တာ၊ ခဲတံကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့အတွက် လူကြီးမိဘတွေ လုပ်ပေးသင့်တာတွေကတော့ သဲတွေ၊ ရေတွေနဲ့ ကစားဖို့ တွန်းအားပေးတာ၊ တွယ်တက်ဖို့အတွက် ခိုင်ခံ့ပြီး နိမ့်တဲ့ ပရိဘောဂတွေ တပ်ဆင်ထားပေးတာ၊ ဘောလုံးလေးတွေ ၀ယ်ပေးပြီး ကန်ဖို့၊ မြှောက်ပင့်ကစားဖို့ လုပ်ပေးတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ အိမ်နီးနားချင်း အရွယ်တူ ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့လဲ မိတ်ဆက်ပေးရပါမယ်။ ပွဲတွေ၊ ဈေးတွေလဲ ခေါ်သွားရပါမယ်။ ဒါမှလဲ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ပါတိုးတက်လာပြီး၊ လူအများကြားမှာ အကြောက်အလန့်မရှိ နေတတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုက ဒီအရွယ်မှာ ကလေးငယ်လေးဟာ ပြေးလွှားနိုင်ပေမယ့် သူ့ပြေးလမ်းက အတားအဆီးတွေကို မရှောင်နိုင်ပါဘူး။ တခါတရံ လူကြီးတွေက ထိမိခိုက်မိမှာ စိုးရိမ်ပြီး မပြေးဖို့ ဟန့်တားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင်လဲ ကလေးရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ပန်းခြံ၊ ကွင်းပြင်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ကစားကွင်းစတာတွေဆီ ခေါ်သွားပြီး ကလေးငယ်လေး အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပြေးလွှားနိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်လေး ဖန်တီးပေးရပါမယ်။
အကြမ်းဖျင်းထိန်းချုပ်ရွေ့လျားစွမ်းရည်တွေကတော့ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပြေးလွှားနိုင်တာ၊ အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားတက်ကြွဆော့ကစားနေတာ၊ လက်နဲ့ ဘောလုံးကို ကိုင်ပြီး ပစ်နိုင်တာ၊ ဘီးပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တွန်းနိုင်တာ၊ ဆွဲနိုင်တာ၊ လှေကားအတက်အဆင်းကို အကူအညီမလိုပဲ လုပ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လားစွမ်းရည်တွေကတော့ စက်ဝိုင်းလေးတွေနဲ့ လိုင်းလေးတွေ ဆွဲတတ်တာ၊ ပစ္စည်းလေးတွေကို ကောက်ယူနိုင်တာ၊ သစ်သားတုံးလေးတွေကို ခြောက်ဆင့်အထိ တာဝါဆောက်နိုင်တာ၊ စာအုပ်တွေကို နှစ်သက်ပြီး တရွက်ချင်းလှန်ကြည့်လာတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ လူကြီး မိဘတွေက သုံးဘီးစက်ဘီးလေးတွေဝယ်ပေးတာ၊ တွယ်တက်စရာ ပရိဘောဂတွေ ထားပေးတာ၊ ပြေးလွှားဆော့ကစားဖို့ နေရာသတ်မှတ်ပေးတာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်နားရက်တွေမှာ ကလေးငယ်လေးကို ပန်းခြံ၊ မြို့ပြနဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာတွေခေါ်သွားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာစေသင့်ပါတယ်။ ပလပ်စတတ်တူ၊ သစ်သားယောင်းမစတာတွေပေးပြီး ဒန်အိုး၊ ဒန်ခွက်စတဲ့ အသံမြည်စေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ခေါက်ခိုင်း၊ တီးခိုင်းရပါမယ်။ ဒါမှလဲ ကလေးငယ်ရဲ့ လက်အသုံးပြုတဲ့ စွမ်းရည် တက်လာမှာဖြစ်သလို၊ အသံလာရာကို လေ့လာစူးစမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးကိုလဲ တိုးမြင့်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ နိမ့်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ်ကနေ မျက်နှာပြင်ပေါ် ခုန်ချနိုင်တာ၊ ခြေဖျားထောက်ပြီးရပ်နိုင်တာ၊ လမ်းလျှောက်နိုင်တာ၊ ခြေထောက်တဘက်တည်းပေါ်မှာ ရပ်နိုင်တာ၊ လှေကားကို လှေကားတထစ်ကို ခြေတလှမ်းနှုန်းနဲ့ တက်နိုင်တာ၊ ဘောလုံးကို မြှောက်ပေးနိုင်တာ၊ ဖမ်းယူနိုင်တာ၊ ဘောလုံးကို အားနဲ့ ကန်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ ခဲတံကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်တာ၊ စာရွက်တွေကို ကတ်ကြေးနဲ့ ကိုက်ပြီး ဖြတ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီး မိဘတွေအနေနဲ့က ဒီအရွယ်မှာ ကလေးနဲ့ ဘောလုံးကစားတာတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ တချို့က ဘောလုံးကစားတာ မိန်းကလေးနဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရွယ်မှာ ခြေ၊လက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်၊ လက်နဲ့ မျက်လုံးတွဲစပ်အသုံးပြုနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေအတွက် ဘောလုံး မြှောက်တာ၊ ဘောလုံးကန်တာ၊ ဖမ်းယူတာတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကစပြီး ကလေးငယ်လေးတွေကို တခြားကလေးတွေနဲ့ ဆော့တတ်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်။ တချို့က ကလေးတွေကို အိမ်ထဲမှာပဲ ထားပြီး တခြားကလေးတွေနဲ့ မရောထားချင်ကြပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာ ဒီကလေးရဲ့ လူအများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်တတ်မှုစွမ်းရည်လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးမျိုးတွေဟာ ကြီးလာတဲ့အခါမှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး ကိုယ်ကျိုးပဲကြည့်တတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်ကလေးလေးတွေဟာ စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ အလေ့အထတွေ ရှင်သန်နေတာမို့ ဒါကို မပိတ်ပင်ပဲ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ရပါမယ်။ ရေကူးတာ၊ ပန်းခြံခေါ်သွားတာ၊ လမ်းလျှောက်တာတွေ လုပ်စေရပါမယ်။ ရောင်စုံခဲတံတွေ၊ စာရွက်တွေတွေ ၀ယ်ပေးပြီး ကလေးရဲ့ ဆန်းစစ်တီထွင်တတ်တဲ့ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရပါမယ်။ အရုပ်တွေကို ကစားပြီးရင် ပြန်သိမ်းဖို့ သင်ကြားပေးရပါမယ်။ မိမိ အ၀တ်တွေကို ကောင်းကောင်းသိမ်းဆည်းတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးရမယ်။ ကလေးရဲ့ အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကို တိုးမြင့်လာအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။
အကြမ်းဖျင်းထိန်းချုပ်ရွေ့လျားစွမ်းရည်တွေကတော့ လမ်းလျှောက်တာမှာ ဖြောင့်ဖြောင့် လျှောက်တာ၊ ဘောလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်တာ၊ မြှောက်နိုင်တာ၊ ကန်နိုင်တာ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်က ပစ္စည်းတွေကို ခါးကုန်းပြီး ကောက်နိုင်တာ၊ သုံးဘီးတပ်စက်ဘီးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မောင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားစွမ်းရည်တွေကတော့ ခဲတံကို လူကြီးတွေကို ကိုင်နိုင်လာတာ၊ သစ်သားတုံးလေးတွေကို ၁၀ ဆင့်အထိ ထပ်နိုင်လာတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ လူကြီးမိဘတွေက ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှု လုပ်နိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ ကလေးရဲ့ အမြင့်တက်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးအရုပ်တွေ၊ သစ်သား အပိုင်းအစတွေနဲ့ ဆော့စေရပါမယ်။ သဲတွေ၊ ရေတွေနဲ့ ဆော့ခိုင်းရပါမယ်။ အ၀တ်အစားကို သူ့ဘာသာသူ ၀တ်တတ်အောင် သင်ပေးရပါမယ်။ ရေအိမ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့ဘာသာသူ သွားတတ်အောင် တွန်းအားပေးရပါမယ်။ တချို့ကလေးတွေက ရေအိမ်သွားတိုင်း မိဘကို ခေါ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားဖို့ တိုက်တွန်းပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်အမှီအခိုကင်းကင်း ရပ်တည်နိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်လာအောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။ ပန်းချီဆွဲတာ၊ ရောင်စုံခြယ်တာ၊ ကော်ကပ်တာတွေအတွက် လုံလောက်မယ့် ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေ ၀ယ်ပေးထားရပါမယ်။
အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ ကြိုးခုန်တာ၊ ပြေးလွှားတာ၊ အမြင့်တက်နိုင်တာ၊ ခြေဖျားသုံးပြီး ပြေးတာ၊ ဘောလုံးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကစားနိုင်တာ၊ ဂီတသံနဲ့ ဟန်ချက်ညီ ကနိုင်တာ၊ ခါးညွှတ်ပြီး ဒူးမကွေးပဲခြေဖျားကို ထိနိုင်တာ၊ ကစားစရာ အမျိုးမျိုး (စီးလျှော၊ ဒန်း၊ climbing frames) တွေကို သူ့ဘာသာ ကစားနိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်ကတော့ ခေါင်း၊ ကိုယ်၊ ခြေ၊ လက်အဂါင်္စုံတဲ့ လူပုံဆွဲနိုင်တာ၊ ခဲတံကို ကောင်းကောင်း ကိုင်နိုင်တာ၊ လက်ချောင်းလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ရေတွက်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ လူကြီးမိဘတွေက အိမ်ပြင်ပမှာ ကလေးတွေ ကစားလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ မြို့လယ်တိုက်ခန်းတွေမှာ နေတာဆိုရင် ဘောလုံးကွင်း၊ ပန်းခြံ၊ ကွင်းပြင်တွေ ခေါ်သွားပေးရပါမယ်။ ကလေးကို စက်ဘီးစီးတတ်အောင် သင်ကြားပေးရပါမယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ကျား၊ မခွဲခြားတဲ့ စိတ်မျိုး မရှိအောင် ယောက်ျားလေးတွေကို ကြိုးခုန်ခိုင်းတာမျိုး၊ မိန်းကလေးတွေကို ဘောလုံးကွင်းမှာ ဘောလုံးကန်ခိုင်းတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးရပါမယ်။ ပုံဆွဲတာနဲ့ ပန်းချီဆွဲတာတွေကို အားပေးရပါမယ်။
အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားစွမ်းရည်တွေကတော့ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားဆော့ကစားတာ၊ ဘောလုံးကို ခြောက်မီတာအကွာအဝေးရောက်အောင် ကန်နိုင်တာ၊ စက်ဘီးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်စီးတတ်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားစွမ်းရည်တွေကတော့ ကလေးငယ်ဟာ အက္ခရာစာလုံးတွေ၊ ကိန်းဂဏာန်းတွေကို အရွယ်တူ ရေးတတ်တာ၊ နာမည်ကို ရေးတတ်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမိဘတွေအနဲ့က ဒီအရွယ်ကလေးငယ်တွေကို အားကစားတမျိုးမျိုး ပြုလုပ်အောင် အားပေးရပါမယ်။ ဘောလုံးကန်တာ၊ ဂျုဒိုကစားတာ၊ ရေကူးတာ စတာတွေ လုပ်ခိုင်းရပါမယ်။ ကလေးငယ်လေးရဲ့ စာအရေးအသားစွမ်းရည် တိုးတက်လာအောင် ဈေးဝယ်စာရင်းရွတ်ပြပြီး လိုက်ရေးခိုင်းတာ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေဆီ စာရေးခိုင်းတာ၊ ဟင်းချက်အညွှန်းတွေ လိုက်ကူးရေးခိုင်းတာတွေ လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်း ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှု စွမ်းရည်တွေကတော့ စက်ဘီးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် စီးတတ်တာ၊ ကိုယ်ခံပညာကစားခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ စကိတ်စီးခြင်း စတာတွေမှာ သက်လုံကောင်းလာတာ၊ ပြေးလွှားရာမှ အရှိန်ထိန်းတတ်တာ၊ ဘောလုံးဖမ်းတာ၊ ပစ်တာတွေကို လက်တဘက်တည်းနဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရွေ့လျားမှုစွမ်းရည်တွေကတော့ စာရေးသားတဲ့ စွမ်းရည်မြင့်တက်လာတာ၊ အပ်အကြီးကို သုံးပြီး ချုပ်လုပ်တတ်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမိဘတွေက ဒီအရွယ်တွေကလေးတွေကို ပြင်ပမှာ ကစားတာကို အားပေးတာ၊ ရေကူး၊ စကိတ်စီး၊ စက်ဘီးစီး၊ ကခုန်တာတွေကို အားပေးတာနဲ့ ကိုယ်ခံပညာတွေ သင်ကြားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးလေးတယောက်ဖြစ်စေဖို့အတွက် အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်၊ ဥာဏစွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဥာဏ် မြင့်မားရေး၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မြင့်မားရေးနဲ့ အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ရေး တွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက် ဆက်စပ်မှုရှိတာကြောင့် မိဘလူကြီးတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားပေးကူညီရင်း၊ ကလေးရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကိုလဲ တိုင်းတာ မှတ်တမ်းပြုစုထားသင့်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။
ခင်မမမျိုး (၂၄၊ ၈၊ ၂၀၀၉)
Meggitt, C. & Walker, J. (2004) An Introduction to Child Care and Education, 2nd edition, Hodder, Oxon
Stoppard, M. (2005) New baby care book:apractical guide to the first three years, Penguin, London
မှတ်ချက်။ ။ အရှေ့မိုးကောင်းကင် စာစောင် (www.crystalthinktank.com) တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ဆရာ စာမသင်တော့ဘဲ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ပြောပြဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
တောအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာ မှီတင်း နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန် မျိုးနွယ်စုတွေဟာ ပိုမို ရှုပ်ထွေး လို့လာနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ တိရစ္ဆာန် အသိုင်းအ၀ိုင်း ရှင်သန်မှုအတွက် တစ်ခုခုကို လုပ်မှ ဖြစ်တော့ မယ်လို့ စဉ်းစား တွေးတောမိကြပါသတဲ့။ တောအုပ်အစပ် မြေလွတ်တစ်နေရာမှာ တိရစ္ဆာန် မျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားလှယ်တွေ အသီးသီး အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးပွဲတွေကို နေ့ရောညပါ ကျင်းပ ကြရ တော့တာပေါ့။ တိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်စု အသီးသီးရဲ့ ရှင်သန်မှုနဲ့ အခွင့်အရေး အတွက်ဆိုတော့ မျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုံစုံညီညီ တက်ရောက်လာကြတယ်။ သိပ်ကို အရေးကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန် အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ဆွေးနွေးလိုက်ကြတာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အနာဂတ် ရှင်သန်မှုအတွက် အင်မတန်မှ ထူးခြားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ် လိုက်ကြရပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ထု အစည်းအဝေးကြီးရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းကို တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါသတဲ့။ သိပ်ကို မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဆိုရင် ကလေးတို့ သဘောတူမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ပေါ်လာတော့တာပေါ့။
ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဘာတွေ လိုအပ်တယ်လို့ ကလေးတို့ ထင်သလဲဟင်။ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်တာပေါ့နော်။
အစည်းအဝေးကြီးရဲ့ ပထမဆုံး အာဂျင်ဒါကို ပြောပြပါရစေနော်။
ပထမဆုံး လုပ်ရမဲ့ အချက်ကတော့ အဲဒီကျောင်းမှာ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေ ဘယ်ပညာတွေကို ဘယ်လို သင်ကြား ကြမှာလဲ ဆိုတာပါပဲတဲ့။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ စာသင်ကျောင်းအတွက် သင်ရိုးညွန်းတမ်း ပြဿနာ ပေါ်လာတယ်လေ။ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ နစ်နာချက်တွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ချကြရင်း ဆွေးနွေးကြရ တော့တာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့ (၁) အပြေးဘာသာရပ် (၂) သစ်ပင်တက်ဘာသာရပ် (၃) ရေကူးဘာသာရပ်နဲ့ (၄) ပျံသန်းခြင်း ဘာသာရပ်တွေကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဝင် ဘာသာရပ်တွေ အနေနဲ့ ထည့်သွင်း သင်ကြားဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဖာသာ သူတို့ လုပ်ကိုင် တတ်စေဖို့ရယ်၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြား စဉ်းစားတွေးတော တတ်စေဖို့ရယ် အတွက် တိရစ္ဆာန်ငယ်ဗဟိုပြု ချဉ်းကပ် သင်နည်းကို အသုံးပြု သင့်တယ်လို့လည်း အစည်းအဝေး သဘာပတိ ပညာရှိ ဇီးကွက်ကြီးက လမ်းညွှန် ဆုံးမခဲ့သတဲ့။
ဘာကြောင့် ဒီပညာရပ်တွေကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ ထည့်သွင်းရတယ်လို့ ကလေးတို့ ထင်သလဲဟင်၊ သဘောတူရဲ့လား။ ကလေးတို့ အမြင်ကို ပြောပြစမ်းပါအုံး။
ဒီပညာရပ်တွေကတော့ တိရစ္ဆာန် အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ပစ္စုပ္ပုန်နဲ့ အနာဂတ် ဘ၀တွေ ရှင်သန်မှု အတွက် အရေးကြီးတာကို အထင်အရှား မြင်တွေ့ နိုင်တာရယ်၊ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်း ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တာတွေရယ်၊ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအချက် စံနှုန်းတွေ ဖြစ်တာရယ်၊ ခေတ်နှင့်အညီလည်း ဖြစ်တာတွေကြောင့်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါသတဲ့။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား တိရစ္ဆာန် ငယ်လေးတွေအားလုံး မသင်မနေရ တပြေးညီ သင်ကြား ကြရမယ်လို့လည်း သက်ဆိုင်ရာက ညွန်ကြားချက်တွေ ထုတ်ပြန်တော့တာပေါ့။
တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေအားလုံး တက်တက်ကြွကြွ။ မိဘတွေလည်း တစ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျောင်းကို လာအပ်ကြပါသတဲ့။ ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ ဆရာဆရာမတွေကလည်း စတိုင်အပြည့်နဲ့ပေါ့။
အဲ---- အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီ။ တိရစ္ဆာန်အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အနာဂတ် ရှင်သန်ရေး အတွက်လည်း မစိုးရိမ် ရတော့ဘူးရယ်လို့ ပီတိတွေ ဖြစ်နေကြတုန်းမှာပဲ ပြဿနာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပေါ်လာတော့တယ်။ ဘာပြဿနာတွေလို့ ကလေးတို့ ထင်သလဲဟင်၊ ကလေးတို့ရဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ဘာပြဿနာတွေ တက်လေ့ရှိပါသလဲ။
ပထမဆုံး ပြဿနာကတော့ မြေပြန့်ရေအစပ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဘဲကလေးတွေဟာ အင်မတန်မှ ရေကူး ကျွမ်းကျင်သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆရာထက်တောင်မှ ပိုပြီး ရေကူး အရာမှာ တော်ကြတယ်ဆိုပဲ။ ပျံသန်းခြင်း ဘာသာရပ်မှာလည်း တော်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ရိုးဝင် အပြေး ဘာသာရပ်မှာတော့ အင်မတန်မှ အခက်အခဲ တွေ့နေကြရတယ်။ သင်ရိုးအတိုင်း လုံးဝ မလိုက်နိုင် ကြဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ကျောင်းဆင်းပေမဲ့ သူတို့ကို အချိန်ပိုတွေ ခေါ်သင်ရတယ်။ ဘဲကလေးတွေ အင်မတန်မှ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရေကူးဘာသာရပ်မှာ သင်ကြားချိန် လျော့ချပြီး အပြေး ဘာသာရပ်အတွက်ကို အချိန်ပိုပေးကြရတယ်။ လူကြီးတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေက အပြေးသင် ဘာသာရပ်အတွက် လေ့ကျင့်ချိန် များများရအောင်လည်း ဖန်တီးကြသတဲ့။ အိမ်မှာ မိဘ၊ ညီအကို၊ မောင်နှမတွေနဲ့နေဖို့ အချိန်တွေ မရှိတော့လောက်အောင်ကို၊ ကစားချိန်တွေ မရှိတော့လောက်အောင်ကို အချိန်ပိုတွေ တက်ကြရ၊ ကျူရှင်ယူကြရနဲ့။ ကလေးဘ၀ ပျောက်ဆုံးကြရတော့တာ၊ သိပ်သနားစရာနော်။
ဒီလိုနဲ့ ဘဲကလေးတွေဟာ အပြေး လေ့ကျင့်တဲ့အချိန် များလာတဲ့အခါမှာတော့ ရေကူးတဲ့အခါ ယက်ဖို့ ခြေထောက်က ပင့်ကူအိမ် ပုံစံ ခြေဖ၀ါးပြင်တွေဟာ ပျက်စီး လာတော့တာပဲ။ အပြေး ဘာသာရပ်မှာလည်း ပိုပြီးထူးချွန် မလာတဲ့အပြင် အရင်တုန်းက ချန်ပီယံအဆင့် ရထားတဲ့ ရေကူး ဘာသာရပ်မှာလည်း သာမန် အဆင့်ပဲ ရှိတော့တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ ကျောင်း ပညာရေး စနစ်သစ်မှာ သာမန်အောင်တာဟာလည်း စာမေးပွဲတော့ အောင်တာပါပဲဆိုပြီး လူကြီးတွေက ဆရာဆရာမတွေကတော့ မစိုးရိမ်ကြဘူးလေ။ လူကြီးတွေက သာမန်အဆင့်ကို ပုံမှန်လို့ သဘောထား ကြပေမဲ့ ရေကူးပညာမှာ အရင်ကလောက် အဆင်မပြေ တော့တာ ကိုယ်တိုင် ခံစားနေကြရတဲ့ ဘဲကလေးတွေက ကြိတ်ပြီး ပူဆွေးသောက ရောက်နေကြတာပေါ့။ ဘဲကလေးတွေရဲ့ မွေးရာပါ ရေကူးကျွမ်းကျင်တာ ပျက်စီးရတာနော်။ သူတို့ခမျာ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ဖွင့်ဟ မပြောရဲဘူးတဲ့။ သူတို့နေရာ ကနေ ကလေးတို့ ၀င်ရောက် ခံစားကြည့်ပါလားကွယ်။ ကလေးတို့ရော တစ်ခုခုကို ခံစားရပြီဆိုရင် ဘယ်သူတွေကို ဖွင့်ဟ ပြောပြ ဖြစ်သလဲဟင်။ အင်းပေါ့… မိဘတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖွင့်ပြောပြ ရမှာပေါ့ကွယ်။
ယုန်ကလေးတွေကြပြန်တော့ အပြေးက သိပ်သန်တာပေါ့။ ရေလုံးဝမကူး တတ်တော့ ရေကူးချိန်တွေ ပိုပြီးပေးရတာ၊ ရေထဲမှာပဲ နေနေရတာတွေကြောင့် စိတ်ဓါတ် အကြီးအကျယ် ကျဆင်း နေရှာကြတယ်တဲ့။ ရေကူး သင်ရတာကို မုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့ မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ရတာဆိုတော့ လုပ်နေရပေမဲ့ မတိုးတက်ရှာဘူးတဲ့ကွယ်။ ဘယ်လောက်သင်သင် သိပ်မတတ်ဘဲ ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ကလေးတို့ရော အဲဒီလို အဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးကြသလားဟင်။ မကြိုက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ သင်နေရတာမျိုး၊ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေရတာမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေလဲဟင်။
သစ်ပင်တက်ခြင်း ဘာသာရပ်မှာ အမြဲတမ်း ပထမရတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရှဉ့်ကလေး တွေကတော့ ပျံသန်းခြင်း ဘာသာရပ်ကို ဘယ်လိုသင်သင် မတတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့။ စာမေးပွဲ အောင်ချင်လွန်းလို့ ခိုးချတဲ့အနေနဲ. သစ်ပင်ထိပ်ကနေ အောက်ကို ခုန်ခုန်ချပြီး ပျံသန်းတတ်တယ် ဆိုတာကို လုပ်ပြပေမဲ့ ဆရာဆရာမတွေ ကတော့ လက်မခံကြဘူးတဲ့။ သစ်ပင်အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပျံသန်းပြမှ အမှတ်ရမယ်လို့ ဆူပူ ကြိမ်းမောင်း ခံရတာပေါ့ကွယ်။ အပြင်းအထန် လေ့ကျင့် ခိုင်းတော့ ရှဉ့်ကလေးတွေဟာ ကြွက်သား ဖုထစ်တွေ တက်လာပြီး ပျံသန်းခြင်း ဘာသာရပ်လည်း ထူးမခြားလာတဲ့အပြင် သစ်ပင်တက်ခြင်း ဘာသာရပ်နဲ့ အပြေးဘာသာရပ်တွေမှာလည်း အများကြီး အဆင့်နိမ့် ကျသွားတော့တယ်။ သနားဖို့ မကောင်းဘူးလားဟင်။
တောအုပ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာနေပြီး အမြဲတမ်းကျောင်းစည်းကမ်း ဖေါက်ဖျက်တတ်တဲ့ သိမ်းငှက် ကလေးတွေက သစ်ပင်တက်ခြင်း ဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန်တိုင်း အငြင်းပွါးကြသတဲ့။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တက်တက် ထိပ်ဆုံးရောက်ဖို့ပဲ ဆိုပြီးတော့ အားလုံးထက် အမြန်ဆုံး သစ်ပင်ထိပ်ကို ရောက်သတဲ့။ ဘာသာရပ်စည်းကမ်းအတိုင်း၊ စာမေးပွဲ စည်းကမ်းအတိုင်း သစ်ပင် ပုံမှန်မတက်ဘဲ အမြဲတမ်း ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရောက် နေလေတော့ ဆရာဆရာမတွေလည်း သိပ်ကို စိတ်ညစ် ကြရတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အငြင်းသန်တဲ့ သိမ်းငှက်လေးတွေကတော့ သူတို့နည်းနဲ့ သူတို့ လုပ်မှာဘဲတဲ့ကွယ်။ သူတို့ဘယ် လို သစ်ပင်တက် ကြတယ်လို့ ကလေးတို့ ထင်သလဲဟင်။ ကလေးတို့ကော သဘောတူ လက်ခံမှာလား။
မြောက်ဘက်ပိုင်းတောအုပ်ရဲ့ တောတန်းတွေပေါ်နဲ့ တောင်ဘက်စွန်းက ကျွန်းတွေပေါ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ နှာခေါင်းတိုတိုနဲ့ ပွေးကလေးနဲ့ မြွေကလေးတွေကတော့ ကျောင်း လုံးဝ မတက် ကြတော့ဘူးတဲ့။ ကျောင်းလခ ဈေးကြီးကြောင်း၊ သွားရေးလာရေး မလွယ်ကူကြောင်းနဲ့ သူတို့အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ မြေတွင်းတူးခြင်းပညာ ဘာသာရပ်ကို မထည့်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီ သင်ရိုးညွန်းတမ်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ အခြားသော ဆင်ခြေတွေ၊ ဆင်လက်တွေ၊ ဆင်နားရွက်တွေ အများကြီး ပေးတာပေါ့ကွယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ စုပေါင်းပြီး ကြိုးစားတားတဲ့ ဒီသင်ရိုးညွန်းတမ်းကို ဝေဖန် ကန့်ကွက်ကြတော့ အခြားသော တိရစ္ဆာန် မျိုးနွယ်စုတွေဟာ သူတို့ကို အင်မတန် စိတ်ပျက် နေကြ တယ်တဲ့။ ပိုပြီး ဆိုးဝါးတာကတော့ အစွယ်တဖွေးဖွေးနဲ့ အစိမ်းရောင် မြေခွေးတွေက သူတို့ကို မြှောက်ပင့် ပေးနေတာရယ် အခြားသော အနီးအနား တောအုပ်က ပင်ဒါဝက်ဝံတွေရယ်၊ နှာခေါင်းရှည်ရှည်နဲ့ မျောက်ဖြူတွေကလည်း သူတို့ကို သင်ပေးမယ် ဆိုတာရယ်ကြောင့် သင်ရိုးအသစ်နဲ့ သီးခြား ကျောင်းတစ် ကျောင်းကို တည်ထောင်ဖို့ စဉ်းစားနေကြတယ်တဲ့။ အစိမ်းရောင်မြေခွေးတွေရယ်၊ ပင်ဒါဝက်ဝံတွေရယ်နဲ့ မျောက်ဖြူတွေဟာ ပိုကောင်းတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကလေးတို့ ထင်သလားဟင်။
ဒီနေ့အဖို့ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီမျှပါဘဲကွယ်။
ကလေးတို့လည်း အတူနေကြရတဲ့သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးရယ်၊ မိမိခံစားချက်တွေရယ်၊ သင်ကြားနေရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ ပညာရပ်တွေနဲ့ မိမိသင်ကြားတတ်မြောက်လိုတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ချင့်ချိန် စဉ်းစားကြပါလို့ မှာကြားရင်း……..
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ အသိဥာဏ် ပညာခွန်အား တိုးတက်ကြပါစေ။